Kedu otu esi eme otu n'ime ibe kachasị elu na Amazon.com?
Iji chekwaa ngwaahịa ndị kachasị elu na Amazon, ọ dị mkpa ka ị mara ọ bụghị naanị otú ọrụ engine engine si arụ ọrụ, kamakwa ihe ị ga-eme ka ịkwado elu na nzụpụta ahịa a.
Enwere ọtụtụ ndụmọdụ ndụmọdụ dị na weebụ na esi esi melite nyocha ọchụchọ na nhazi ndị dị otú ahụ dị ka Google na Bing karịa iji melite nhụpụta ngwaahịa gị na ọchụchọ Amazon.
Anyị na-eche na a ga-enyocha ihe omimi nke ịbanye na TOP na Amazon.com. Ọ bụ ya mere post a ji tinye aka na ndụmọdụ ndị na-enyere aka ibuli ọkwa gị na Amazon.
Amazon na-arụ ọrụ dịgasị iche iche nke vines oghere iji chọpụta ihe dị na ngwaahịa, gụnyere ogo ọchụchọ, TOP 100 ndị na-ere ahịa n na ụdị ngwaahịa ọ bụla, akụkọ ihe mere eme na mbụ, na ihe ndị ọzọ.
Site n'ịtụle ihe ndị a nile, o yiri ka ọ bụ mgbagwoju anya iji chọpụta otú ị ga-esi bulie na Amazon. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ewepụta usoro nhazi nke ndị ọzọ, ị ga-enwe ike ịhụ ike ya.
Ya mere, olee otu ị ga - esi na Amazon ma mee ka ahịa gị dịkwuo elu? N'isiokwu a, ị ga-ahụ nzaghachi zuru ezu maka ajụjụ a na ọbụna karịa.
Olee otú ị ga - esi bụrụ otu n'ime n'elu Amazon.com?
Ihe kachasị mkpa na Amazon bụ ngwaahịa ahịa. A na-etinye ihe ndị dị na ọnụahịa ahịa dị elu na TOP nke Amazon results page. Ngwaahịa TOP na-ere ahịa nwere ikike ogo dị ukwuu maka ọtụtụ ajụjụ gbara ajụjụ. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ahịa ngwaahịa ahụ dịkwuo mma, ọnụọgụ nke ajụjụ ọchụchọ na-eme ka ngwaahịa ahụ baawanye.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepe usoro nke Amazon nchịkọta njirimara ma nweta nhụsịnụ dị nchọta na nsonaazụ ọchụchọ, ịkwesịrị ịbawanye ọkwá gị ngwa ngwa o kwere mee.
Ikwesiri ịmalite usoro kachasị mma site n'ilekwasị anya na mmụba mgbanwe nke mgbanwe. Ị nwere ike iji ụdị mgbasa ozi na nkwalite dịgasị iche iche iji kpoo okporo ụzọ ezubere iche maka ngwaahịa gị. N'ikpeazụ, ọ ga - enyere gị aka ịchọta ihe ngosi gị na nyocha Amazon.
Iji meziwanye ngwaahịa gị na Amazon, ị kwesịrị itinye nlezianya anya na mpaghara ndị dị elu. Ka anyị lebakwuo anya n'otú o si arụ ọrụ.
Ịchọ Amazon, ị nwere ike ịkọwa ụdị ọkwa dị elu ma ọ bụ nyochaa na ngalaba niile dịnụ. Ọ bụrụ na ị na - agba mbọ na ngalaba niile, nchọta ọchụchọ maka nyocha gị na-alaghachi maka ngalaba niile nke ngwaahịa ndị dị mkpa. Iji mebie nsonaazụ ọchụchọ ha, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịpịpụta rịzọlt n'okpuru ngwa. Otú ọ dị, ngwaahịa kachasị mma onye ọrụ na-achọ ka etinye ya n'ozuzu ya. Ịpị na nchọta ọchụchọ dịgasị iche ga-enyere onye ọrụ aka ịchọ n'ime ụdị a kama nke ngalaba niile.
Ọ bụ ya mere m ji kwusi ike ka ị ghara iji "ngwa ngwa" dịka ụdị kachasị maka ihe gị dịka ngwaahịa gị nwere ike ịghọ ihe a na-ahụghị anya na nsonaazụ ọchụchọ. Kama nke ahụ, duzie nchọpụta ahịa zuru ezu ma depụta ngwaahịa gị na ngalaba kachasị elu bụ nke e depụtara ngwaahịa ndị kachasị ire ahịa Source .